"1 Tamin’izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin’ny Sabata; ary noana ny mpianany ka nanoty salohim-bary, dia nihinana. 2 Fa nony nahita izany ny Fariseo, dia hoy izy taminy: Indro, ny mpianatrao manao izay tsy mety hatao amin’ny Sabata. 3 Ary hoy Izy taminy: Tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon’i Davida, raha noana izy mbamin’izay nanaraka azy, 4 Fa niditra tao amin’ny tranon’Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho, izay nahadiso raha haniny, na izay nanaraka azy, afa-tsy ny mpisorona ihany? 5 Ary tsy mbola novakinareo ao amin’ny lalàna va fa amin’ny Sabata ny mpisorona ao amin’ny tempoly manota ny Sabata, nefa tsy manan-tsiny? 6 Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. 7 Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe: famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà, dia tsy mba nanameloka ny tsy manan-tsiny hianareo. 8 Fa Tompon’ny Sabata ny Zanak’olona. 9 Ary nony niala teo Jesosy, dia niditra tao amin’ny synagoga; 10 ary, indro, nisy lehilahy maty tànana teo. Ary ny olona nanontany Azy hoe: Mety va ny mahasitrana amin’ny Sabata? mba hiampangany Azy. 11 Ary hoy Izy taminy: Iza moa no olona ao aminareo, raha manana ondry anankiray, ka latsaka any an-kady amin’ny Sabata, no tsy handray azy sy hampakatra azy? 12 Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin’izany dia mety ny manao soa amin’ny Sabata. 13 Dia hoy Izy tamin-dralehilahy: Ahinjiro ny tananao. Dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray. 14 Ary ny Fariseo dia lasa nivoaka ka niara-nisaina mba hahafaty Azy. 15 Fa Jesosy nahalala izany, ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka Azy, ka dia nositraniny avokoa izy rehetra; 16 ary nandrara azy Izy tsy hanao izay hahafantarana Azy, 17 mba hahatanteraka izay nampilazaina an’Isaia mpaminany hoe: 18 Indro ny Mpanompoko, Izay nofidiko, Ny Malalako, Izay sitraky ny foko indrindra; Hapetrako ao aminy ny Fanahiko, Ary hitory ny rariny amin’ny jentilisa Izy; 19 Tsy hifanditra, na hiantso mafy Izy; Ary tsy hisy handre ny feony any an-dalana; 20 Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, Ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona, Ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy; 21 Ary ny anarany no hitokian’ny jentilisa." Matio 12:1-21
Sabata, andro fitsaharana. Tamin’ny vaninandro famoronana no nanendren’Andriamanitra ny andro fahafito na sabata ho andro hitsaharana (Genesisy 2:2-3). Rehefa tonga ny didy folo dia napetraka ho andro hanamasinana an’Andriamanitra izany (Eksodosy 20:8-11). Raha araka ny fijerin’ny Fariseo (1) dia tsy azo atao mihitsy ny manao zavatra na inona na inona amin’ny andro Sabata. Inona no nambaran’i Jesosy tamin’izy ireo? Tompon’ny Sabata ny Zanak’olona, mety ny manao soa amin’ny sabata (8, 12).
Sabotsy sa Alahady? Mbola mitoetra hatramin’izao ny fanokanana andro iray amin’ny herinandro hiangonana saingy misy ny mihazona ny andro fahafito, misy kosa ny nanova izany ho andro voalohany amin’ny herinandro (Alahady) izay andro nitsanganan’i Jesosy Kristy (Asan’ny Apostoly 20:7; 1 Korintianina 16:2) tamin’ny maty. Safidy izany ary tsy tokony hifampitsarana (Rômanina 14:5) satria tsy miankina amin’izany (lalàna) intsony ny famonjena.
Tsy novakianareo va? Fariseo sy mpanora-dalàna no anontanian’i Jesosy an’izany fanontaniana izany. Matsiro ery rehefa mandray avy amin’ny Tompo famoahankevitry ny Soratra masina tahaka izao (3-7, Lioka 24:27, 32). Mila mamaky tsara (mandinika) ny Tenin’Andriamanitra isika mba hahatakatra tsara ny tena heviny sy ny hafatra ampitain’Andriamanitra ao anatin’izany! Ndeha hanahaka an’i Maria hifidy ny anjara tsara e! (Lioka 10:38-42).
Ilay Zanaka malalan’Andriamanitra. Fihetsika feno fahendrena ny fisintahan’i Jesosy sy ny fandrarany ny olona tsy hanely ny fahagagana maro vitany (15-16). Andriamanitra manam-pahefana sy voninahitra, hitoeran’ny Fanahin’Andriamanitra kanefa dia tsy tia sehoseho (17-21).
Vavaka: Tompo ô!ampianaro aho hahay hanetry tena toa anao!